Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay in ay xidho Safaaraadka Imaaraadka ee Muqdisho dalkana ka saarto Diblumaasiyiinta Imaaraadka. – Xeernews24
Gudoomiye kuxigeenkii hore ee Baarlamaanka Dalka Kenya Faarax Macalin ayaa ka hadlay xiisada Siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan gaar ahaan faragalinta dowlada Imaaraadku ku heyso siyaasada Soomaaliya.
Qoraalka uu Siyaasiga Faarax Macalin soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaaraha in dalka ka saaraan Diblumaasiiina u dhalatay Imaaraadka.
Waxa uu sidoo kale Faarax Macalin ugu baaqay Madaxda dalka in gabi ahaan la xidho saldhigyada Milatari ee Imaaraadka Soomaaliya ka furatay iyo sidoo kale safaaradooda kutaala magaalada Muqdisho.
” Farmaajo iyo Kheyre, ka saara Imaaraadka Muqdisho,Ilaahay dartiis, oo xidha safaaraddooda, saldhigyadooda Milatari ee Muqdisho, haddii sirdoonkiinnu hayo caddeymo ku filan in Imaaraadka Soomaaliya ka wado argagixisannimo, arrintan la taga Qaramada Midoobey,ha sugina ilaa ay Soomaaliya ka dumiyaan”. Ayuu yidhi Faarax Macalin.
Dowladda isu taga Imaaraaka Carabta ayaa xiligan faragalin siyaasadeed oon qarsooneyn ku heysa Dowladda Soomaaliya, waxa ayna dowladda Imaaraatka dhaqaalo badan ku bixineysaa sidii Mucaaradka u ridi lahaayeen Dowladda Farmaajo hogaamiyo.
Saamaynta Saldhiga Milateri ee Turkigu ka samaystay Jasiiradda Sawaakin! MAQAAL: Maxaa u qabsoomay Dowladda Soomaaliya ee sannadka 2017?